Wakambonzwa Kunzwa nezveNhamo? Tsoka Nhanhatu Kukwira? | Martech Zone
Wakambonzwa Kunzwa nezveNhamo? Tsoka Nhanhatu Kukwira?
Muvhuro, Nyamavhuvhu 2, 2010 Mugovera, October 25, 2014 Douglas Karr
Michael akatumira pane iyo blog muna Chivabvu, paakashanya CMS Expo, kuti Plone yaive imwe yema tracks ipapo. Plone? Chii chinonzi Plone? Ndichangobva kuziva…
Plone iri pakati pe top 2% yeese akavhurwa sosi mapurojekiti pasirese, ne 200 musimboti vagadziri uye kupfuura 300 mhinduro vanopa munyika 57. Iyo purojekiti yakagadziriswa kubva 2001, inowanikwa mu mitauro inopfuura makumi mana, uye ine iyo yakachengeteka chengetedzo track rekodhi yechero yakakura CMS. Iyo ndeyaPlone Foundation, 501 (c) (3) isiri-ye-purofiti sangano, uye inowanikwa kune ese makuru mashandiro masisitimu.
Plone isimba rinoshamisa zvine simba zvemukati manejimendi. Kunze kwezvose zvakajairika zvemukati manejimendi manejimendi maficha, pane mashoma akanyanya kumira:
Yakakura Scalability - hazvishamise kuti kuitiswa kwePlone kuve nemazana ezviuru kana mamirioni emapeji. Izvi zvakanaka zvisingadzoreke mune mazhinji zvemukati manejimendi masystem
Tsika Routing uye Kubvumidzwa - iyo yakaoma kunzwisisa nzira, kugadzirisa uye kubvumidza maitiro anogona kuitwa nyore nyore. Kune vatengi bhizinesi, izvi zvine simba zvakanyanya.
Kukurumidza uye Kupusa - Plone inokurumidza zvinoshamisa pakushandisa mapeji uye iyo interface iri nyore kwazvo uye inoshandiswa kune wepakati mushandisi.
Sezvo nemazhinji akavhurwa sosi mapurojekiti, Plone haisi isina yayo inoshamisa nharaunda yevanogadzira uye kurodha pasi kuti uwedzere-on. Kune angangoita 4,000 mawedzero inowanikwa mune repamhepo repamhepo yekuwedzera mashandiro ekuisa kwako - kusanganisira kublogi, mepu, kufambiswa kwemabasa, kutepfenyura kwenhau uye maturusi enharaunda.
Sezvo ini ndinonyora blog zvinyorwa, panogara paita kunge pane imwe mhando yeIndiana yekubatanidza. Plone haina kusiyana. Calvin Hendryx-Parker inhengo yebhodhi ye Plone Nheyo uye ndiri muno muFortville, Indiana. Mudzimai waCalvin, Gabrielle Hendryx-Parker akatanga femu, Tsoka Nhanhatu Kumusoro, muna 1999 muSan Francisco uye vakatamisa iyo International consulting firm muno muIndiana. Gabrielle anobatawo MBA muKushambadzira uye Hutungamiri kubva kuEm Lyon, France.
Ndakashanya Tsoka Nhanhatu Kumusoro mwedzi wapfuura uye akafadzwa. Nzvimbo yavo yakagadziridzwa yehofisi mudhorobha reFortville inzvimbo inoshamisa. Ivo vanotova neyavo mini-data centre ine backup majenareta uye fiber kumisikidza kuti vaperekedze vatengi vavo 'epakati kumisikidza ku Lifeline Dhata Nzvimbo. Ivo vanopa kugovera, kwetsika kusimudzira, yekubatanidza masevhisi, uye kuvaka kunze kwePlone kuiswa kwemakambani muHupenyu Sayenzi, Kudzidza Kwepamusoro uye ingangoita mamwe ese maindasitiri epasirese.
Tsoka Nhanhatu Kumusoro dzichangobva kuburitswa SolrIndex 1.0, chigadzirwa chePlone / Zope icho chinopa kunatsiridzwa kwekutsvaga kugona nekushandisa Solr, inozivikanwa yakavhurwa sosi bhizinesi yekutsvaga papuratifomu kubva kuAppache Lucene chirongwa. SolrIndex inouya nekutsva nekukurumidza uye kwakanyanya scalable yekutsvaga kugona. SolrIndex inowedzerwa nekugadzirwa, zvinoreva kuti ine mukana wekubatanidza pamwe nemamwe mareti nemakatalog. Idzi inhau dzakanaka dzemasaiti ayo anoda kupa kugona kwekutsvaga pane akawanda marekodhi.
Tsoka Nhanhatu Kumusoro ikozvino dzave nevashandi vanopfuura makumi maviri uye yakaenderera mberi nekodhi mbiri-manhamba ekukura gore-pamusoro-gore kubva kutanga. Mutero kune hunyanzvi uye rutsigiro rwavanopa vatengi vavo. Tsoka Nhanhatu Kumusoro dzinotungamirawo Plone Tune-Up Zuva… mwedzi wega wega, wezuva rese, chiitiko chaicho chekubatsira nharaunda yePlone.
Tags: Bloggingcmszvemukati manejimendi systemcontent management systemsyakakura cmsnzvimbo inemidhiya kutendereraplonetsoka nhanhatu kumusoroWorkflows
Iwo Unonyanya Kukosha Mutemo muSocial Media PR
Mubairo ne Autonomy, Mastery uye Chinangwa